केपी ‘बा’लाई एक लडाकूको चिठी
१२ मंसिर २०७८, आईतवार २३:१७ November 29, 2021 Nonstop Khabar
केपी ‘बा’ लालसलाम ! तपाईको सुस्वास्थको कामना गर्दछु तपाईको चलिरहेको महाधिवेशनको उदघाटन र बन्दसत्र सफलताको शुभकामना दिन चाहान्छु । यस सन्दर्भमा म र मेरा सहयोद्वाहरुलाई तपाईले सम्झिनु भयो । त्यसप्रति आाभारी नै छौ । तथापि हामी पूर्व लडाकु (तपाईकै शब्द सापटी) घाईते, अपाङ्गलाई तपाईको नेतृत्वको पार्टीले जिम्मेवारी लिएर हरेक समस्या समाधान गर्ने आफ्नो सुभेच्क्षा प्रकट […]
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १९:५१ September 16, 2021 Nonstop Khabar
समाज र राज्यको उत्पति भएदेखि प्राचीन साम्यवाद जसमा समूहको मूली महिला थिए । सामूहिक यौन भएकोले सन्तानको बाबु उनैले नै बताउथिन । मानव जनसंख्या बढ्न थाल्यो खाना खाने जंगली पशुहरु घरमा ल्याएर पाल्ने त्यसबाट दुध, दही, मही, अन्न, फलफुल खाएर पनि बाँच्न सकिन्छ तिनै घरपालुवा पशुहरु पनि घरमा खान सकिन्छ भन्ने पत्ता लगायो । जंगली […]
हामी बसेको विश्वको दुई तिहाईभन्दा बढि भाग पानीले ढाकिएको छ । तर, पनि यही विश्वमा बस्ने दुई तिहाइभन्दा बढि मानिस पर्याप्त सफा र स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित रहेका छन् । किनभने, महासागर र सागरहरुमा रहेको ९७ प्रतिशत पानी नुनिलो र पिउन लायक छैन । केवल ३ प्रतिशत पानी मात्र विश्वमा पिउन हुने खालको छ । […]
एमसीसी लागु नगरे देश बन्दैन भन्ने बुद्धिजीवीहरुका नाममा
१७ भाद्र २०७८, बिहीबार ११:०२ September 6, 2021 Nonstop Khabar
नेपालमा वैदेशिक सहयोग, अनुदान स्वीकार गर्नेबारे स्पष्ट ब्यबहारिक नीति देखिदैन । स्पष्ट नीतिको अभावमा दाताका स्वार्थको चपेटामा पर्नुपरिरहेको छ । दातापिच्छे फरक फरक सम्झौता, सहमति वा शर्तहरु स्वीकार गर्नु परिरहेको छ । प्राय सबैजसो सहयोग र अनुदानमा जे जस्ता शर्तहरू राखिन्छन, त्यसले नेपालको अस्मितामा सधै चोट पुग्ने गरेको छ। नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा दाताहरु हावी […]
नेपाल यहाँका भुसतिघ्रे राजनीतिक नेताहरुको अज्ञानी खेलको प्रयोगशाला भइरहेको छ । समयको यस कालखण्डमा देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहन पुगेका सममकालीन नेता भनाउँदाहरु भद्दा मजाक गरिरहेका छन् । अझ त आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भएको स्वघोषणा गर्नेहरुतिर हेर्दा अनौठो लाग्छ । उनीहरु यतिबेला नेपाली जनताको सहिष्णु चेतनाको फाइदा उठाउँदै गर्नसम्म मनपरी गरिरहेका छन् । यिनका गतिविधिले […]
महेश्वर मानन्धर – सडक विस्तार पिडित अभियन्ता अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने विश्वका हरेर ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरूले कानुनी रूपमा लिपिबद्ध भएका अधिकार पाएका छैनन् । कुनै पनि भुमि र सो सँग जोडिएका संस्कार र संस्कृति, भाषा, धर्म लगायतको संरक्षण आदिवासीजनजातिहरूका कारण भएका छन् । तिनै आदिवासीजनजातिका कारण देशले पहिचान पाएको हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो […]
बन्द, हड्ताल, जुलुसको राजनीति अन्त्य गरौं
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०६:३० July 21, 2021 Nonstop Khabar
समाज र राज्यको उत्पति भएदेखि राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र राज्यको धुरीमा पुगी कसरी मोजमस्ती गर्ने लुट्नेबीच संघर्ष चल्दै आएको छ । दासयुगमा दास मालिकबीचको संघर्ष स्पार्टसहरुले ठूलो रगतको मुल्य चुकाएर सामन्ती शासन कृषियुग सुरु गराएका थिए । सामन्तले कृषकको चरम शोषण दमन गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्र जनताको शासन जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले गर्ने भनि १७ […]
अमेरिकी प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो ? अमेरिकी प्रजातन्त्र पूँजीवादी प्रजातन्त्र हो । स्वतन्त्र तथा प्रतिष्पर्धात्मक शासन अमेरिकी प्रजातन्त्रको स्वरुप हो । निजि स्वामित्व र वजारमुखी अर्थतन्त्र भएको प्रजातन्त्र नै अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । जहाँ समाजको स्वामित्व भन्दा पनि पूजीपतिहरुको स्वामित्व बढी हुन्छ । अमेरिकी प्रजातन्त्रमा पूजी नै सर्वोपरी हुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । अर्थतन्त्रको […]
सर्वोच्चको फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको छ – सांसद श्रेष्ठ
२८ असार २०७८, सोमबार १७:०९ July 12, 2021 Buddha Sharan
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आजको ऐतिहासिक फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको धारणा अभिब्यक्त गर्नु भएको छ । यस फैसलापछि कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने नजीर स्थापना भएको बताउनु भयो । सामाजिक संजालमा […]
सन् १९२१ जुलाई १ तारिखमा चीनको सांघाई शहरमा स्थापना भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विश्वकै सवैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली कम्युनिष्ट पार्टी हो । पछिल्लो जानकारी अनुसार यस पार्टीका क्रियाशिल सदस्यहरुको संख्या लगभग दश करोड रहेको छ । करोडौं चिनियाँ किसान, श्रमिक र मजदूर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पार्टी एक महान माक्र्सवादी क्रान्तिकारी राजनीतिक संगठन पनि हो […]